Cajiib: Tababare koox kubadda cagta ah oo la xiray, iyadoo loo haysto inuu dilay afar qofood, kaddibna gubay!! – Gool FM
Cajiib: Tababare koox kubadda cagta ah oo la xiray, iyadoo loo haysto inuu dilay afar qofood, kaddibna gubay!!
(Zurich) 16 Maajo 2016 – Waddanka Switzerland ayaa waxaa shalay lagu xiray Tababare muddo dheer laylinayay koox kubadda cagta kaddib markii lagu soo eedeeyay inuu dilay 4 qofood.
Fal dambiyeedkani ayaa bishii December ee la soo dhaafay ka dhacay Tuulo yar oo lagu magacaabo Rupperswil oo ku taalla Switzerland, halkaasoo ah xarunta ay kooxdan yari ka dhisan tahay.
Tababarahan oo 33 sano jir ah ayay boolisku magiciisa kusoo gaabiyeen Thomas N., waxaana loo haystaa dilka Haweeney lagu magacaabi jiray Carla Schauer oo 48 jir ahayd iyo 2 wiil oo ay dhashay kuwaasoo da’doodu kala ahaayeen 13 iyo 19 jirro, halka qofka 4-aad ee la dilayna ay ahayd gabar uu saaxiib la ahaa wiilka weyn oo iyaduna 19 jir ahayd, kuwaasoo dhamaantood la sheegay in uu dhuunta ka wada gooyay kaddibna meydkoodii gurigoodii uu ku gubay.
Duqa Tuulada falku ka dhacay ee Rupperswil oo 19 mile kaga beegan Zurich ninka magacaabo Rudolf Hediger ayaa sheegay in Tuuladiisa oo idil ay ka naxsan yihiin wixii dhacay, isagoo xusay in cid ka tirsan Naadiga aysan fileynin in Tababarahoodu uu falkan waxashnimada leh ku kacay.
SAWIRRO XUL AH: Leicester City oo basas badan ku soo bannaan bixisay koobkeeda Premier League...(Inkabadan 100,000 oo taageerayaal oo isugu soo baxay magaalka)